महासङ्घ सार्वजनिक यातायात खुलाउन चाहन्छ कि बन्द गराउन ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/महासङ्घ सार्वजनिक यातायात खुलाउन चाहन्छ कि बन्द गराउन ?
माग प्रष्ट, बटमलाइनमा अन्योल महासङ्घले आफै पनि अहिले बन्द अवस्थामा रहेको सार्वजनिक यातायात तत्कालै खुला गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । तर त्यसका लागि यातायात क्षेत्रका ४÷५ वटा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने महासङ्घको तर्क छ । ती मागहरुमा सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण, सवारीसाधनको मर्मतसम्भार, भाडादर, कर्जा तथा ब्याजको पुनर्संरचना लगायतछन् ।
कोरोनाबाट बाबुको मृत्यु, तर छोराले आइसोलेसनको झ्यालबाटै हेरिरहे..
अख्तियारको ‘राडार’मा तानियो निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय सभाबाट अख्तियार विधेयक पारित हुँदै